ရခိုင်အရေး ကုလအဖွဲ့ မလာဖို့ တားမြစ်မှု အပေါ် အမြင်များ | Danya Wadi
The Voice Of Arakani
Towards Peaceful Society ငြိမ်းချမ်းသောလူ့ဘောင်သစ်ဆီသို့
English – မြန်မာ
မြန်မာ – English
English – Rohingya
Rohingya – English
»သတင်းများ»ရခိုင်အရေး ကုလအဖွဲ့ မလာဖို့ တားမြစ်မှု အပေါ် အမြင်များ
ရခိုင်အရေး ကုလအဖွဲ့ မလာဖို့ တားမြစ်မှု အပေါ် အမြင်များ
Posted by danyawadi on June 30, 2017 in သတင်းများ, General
30 ဇွန်၊ 2017
ကုလသမဂ္ဂက ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ ရခိုင်ဒေသတွင်း လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှု စုံစမ်းမယ့် အချက်အလက် ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင်း လာရောက်ခွင့် ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ မြန်မာအစိုးရက ငြင်းဆို လိုက်တာ ဟာ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်း မဟုတ်ပဲ အခြေအနေတွေကို ပိုဆိုး လာစေမှာဖြစ် တယ်လို့ A.I ခေါ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ကြီးက တုန့်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရရဲ့ အခုလို ဆုံးဖြတ်ချက် နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမြင်တွေကို ကိုဉာဏ်ဝင်းအောင်က တင်ပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်က လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုတွေကိုစုံစမ်းဖို့ အချက်အလက် ရှာဖွေရေးအဖွဲ့တဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံစေ လွှတ်ရေးကို ဂျနီဗာအခြေစိုက် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီက ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ထဲမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ခဲ့တာပါ။ အဲဒီ ကုလ အချက်အလက် ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကို မြန်မာ နိုင်ငံတွင်း လာရောက်ခွင့် ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ အစိုးရရဲ့သဘောထားကို ဒုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်က ဇွန် ၂၉ ရက် ကြာသပတေးနေ့ ကျင်းပတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“ ကျနော်တို့ အနေနဲ့ Fact Finding Mission စေလွှတ်တဲ့ အစီအစဉ်ကို ကန့်ကွက်ရန်ပြုနိုင်သော်လည်းပဲ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ Mandate နဲ့ ဖွဲ့စည်းတဲ့ အဲဒီ ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုသော်လည်းကောင်း အဲဒီ Mission ကနေပြီးတော့ အစီရင်ခံစာ ပြုစုတင်သွင်းခြင်းကို သော်လည်းကောင်း ကျနော်တို့ အနေနဲ့ ဟန့်တားနိုင်တဲ့ အနေအထား ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကိုတော့ လာရောက်ခွင့် မပြုဖို့ အတွက် မြန်မာသံရုံးတွေကို လိုအပ်တဲ့ ညွှန်ကြားမှုများ ပြုလုပ်ကာ တားဆီးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။”
ရခိုင်အရေးအတွက် အချက်အလက်ရှာဖို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ စေလွှတ်နိုင်ရေး ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့် အရေးကောင်စီ က ဆုံးဖြတ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ တာဟာ ရခိုင်ဒေသရဲ့အခြေအနေကို ပိုပြီး ဆိုးရွားသွားစေနိုင် တာကြောင့် မြန်မာအစိုးရက ဒါကို လက်မခံရတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ရဲ့ မကြာသေမီက သွားရောက်ခဲ့တဲ့ ဆွီဒင်ခရီးစဉ်အတွင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အချက်အလက် ရှာဖွေစုံစမ်းရေးအဖွဲ့ဟာ အခြေအနေ ပိုကောင်းလောအောင် အထောက်အကူ မပြုနိုင်တဲ့အပြင် မတူကွဲပြားတဲ့ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းတွေကြား ပိုပြီးတော့ ရန်လိုမုန်းတီး မှုတွေ ဖြစ် လာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီ ကုလသဂ္ဂရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကျမတို့ လက်မခံတာကတော့ ကျမတို့တည်ဆောက် လိုတဲ့ ဒေသတွင်း အချင်းချင်း အပြန်အလှန် ယုံကြည်နားလည်မှုနဲ့ သဟဇာတရှိရှိ အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်နိုင်မှုကို အထောက်အပံ့ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မယုံကြည်သလို၊ နှစ်ဘက်လုံးမှာရှိနေတဲ့ ကြောက်ရွံ့စိတ်တွေကိုလည်း ဖြေဖျောက်ပေးနိုင် လိမ့်မယ်လို့ ကျမ မထင်ပါဘူး။”
အခုလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပေမယ့်၊ ကုလသမဂ္ဂ အချက်အလက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကို လာခွင့် မပေး တာကသာ အခြေအနေတွေ ပိုဆိုးလာစေမှာဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာအစိုးရရဲ့ ငြင်းဆန်နေမှုဟာ ပြဿနာ ကိုဖြေရှင်း တဲ့ နည်းလမ်းမဟုတ်ဘူးလို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့ A.I ရဲ့ ဝါရှင်တန်ဒီစီ အကြီးအကဲ Mr. T Kumar က တုန့်ပြန်ပြောဆို လိုက်ပါတယ်။
“ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အချက်အလက် ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကို မြန်မာအစိုးရက လာခွင့်မပေးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် A.I အဖွဲ့က လွန်စွာမှ စိတ်ပျက်မိ ပါတယ်။ ဒါဟာ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရာမရောက်ပဲ အခြေနေတွေကို ပိုပြီး ဆိုးဝါး လာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစုံတခုကို ဖုံးကွယ်ထားချင်တဲ့ အခါမျိုးမှာသာ လာခွင့်မပြုတဲ့သဘော ရှိတတ် တာကြောင့်၊ ကုလကော်မရှင်ကို အမြန်ဆုံး လာခွင့်ပြုဖို့ အခိုင်အမာ တောင်းဆိုချင်ပါတယ် ”
တကယ်တော့ ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင် လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေဟာ သူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက် လုပ်ဆောင် နေကြ တာမျိုးရှိသလို၊ မြန်မာအစိုးရ ဘက်ကလည်း ကိုယ့်ပြည်တွင်း အခြေနေတွေပေါ်မူတည်ပြီး အချက် အလက် ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကို တားမြစ်ရတာမျိုး ဖြစ်တယ်လို့ သူနားလည်ကြောင်း အမေရိကန်အခြေစိုက် မြန်မာ့ အရေးသုံးသပ်သူ ဒေါက်တာတင့်ဆွေက ပြောပါတယ်။
“ရခိုင်ဒေသအရေးအခင်းကတော့ အင်မတန်မှ ရှုပ်ထွေးတော့ အဲဒီလို နိုင်ငံတကာက လာတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ လာလိုက်ရင် ပိုပြီးတော့ ဆိုးသွားမလားဆိုတဲ့ တွက်ချက်မှုနဲ့ အစိုးရက ဆုံးဖြတ်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ နိုင်ငံတော်အတွက် အကောင်းဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပဲ ကျနော်ယူဆပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ က နိုင်ငံတကာဆိုတာ .. လူ့အခွင့်အရေးပြောပြော ၊ အထူးသဖြင့်တော့ ကုလသမဂ္ဂပြောပြော ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေ ကတော့ သူတို့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ဦးတည်ချက်၊ ရပ်တည်ချက်နဲ့ တနည်းအားဖြင့် အကျိုးစီးပွားပေါ့ သူတို့ဘက်က ကြည့်ကြတယ်။ ဆိုတော့ ကျနော်တို့နိုင်ငံ အစစအရာရာ ချို့တဲ့နေတဲ့အချိန်မှာ တခြားကနေ၀င်လာတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေ မဖြစ်အောင်လို့ နိုင်ငံတကာ ဖိအားပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားအတွက် လုပ်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ကျနော်သုံးသပ် ပါတယ်။”
ဒီအတောတွင်း ပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက မောင်တောဒေသတ၀ိုက်မှာ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ အတွက် လူသစ်စုဆောင်းနေတာတွေရှိ သလို၊ ဒေသခံတွေ ရုတ်တရက်ပျောက်ဆုံးသွားတာ အသတ်ခံရ တာတွေလည်း ရှိနေကြောင်း၊ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်တွေထဲ အကြမ်းဖက် လေ့ကျင့်သင်ကြားတဲ့ မြေအောက်ခန်းတွေနဲ့ လက်နက် တချို့ကိုလည်း ရှာဖွေ သိမ်းဆည်း မိခဲ့တယ်လို့ နိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံရုံး က သတင်းထုတ်ပြန် ထားပါတယ်
← မြန်​မာလုံခြုံ​ရေး အကြံ​ပေး ဘင်္ဂလား​ဒေရှ် သွားမည်​
ရခိုင်အရေး ကုလ စုံစမ်းရေး အဖွဲ့ကို လက်ခံဖို့ အကဲခတ်တွေ တိုက်တွန်း →
Myanmar Love Stories eBooks
ဥပ​ဒေ စာအုပ်​ ၅၄ အုပ်​ ​လေ့လာရန်​ link
ဓည၀တီဆိုဒ်သို့မှန်ကန်သော သတင်း၊ ဆောင်း ပါး၊ ဓါတ် ပုံ များ ပေး ပို့ လို ပါ က danyawadi9@gmail.com နဲ့ ဆက် သွယ် ပါ ။ . . . If you want to post any real documents such as , History,Articles , photos and News ,Contact here.
မြန်မာ - English အင်္ဂလိပ်- အဘိဓါန်
e Book download လုပ်​ရန်​
English အင်္ဂလိပ် - မြန်မာ အဘိဓါန်
မောင် (စွယ်စုံကျမ်း) မှ ဖတ်မှတ်စရာ လင့်များ
ဆုံဆည်းရာ , Sone Sea Yar , Websites
Rohingya to English Dictionary ( A to Z )
“တရုတ်-မြန်မာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေး တရုတ်ယွမ်ကို နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှု ငွေကြေးအဖြစ် အသုံးပြုရန် ဆွေးနွေးလျက်ရှိ”
ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ အစည်းတွေ အကန့်သတ်မရှိ ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုဖို့ EU တိုက်တွန်း
လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်သူများကို ဒေါ်ေ အာင်ဆန်း စုကြည် ကာကွယ်တော့ မည် မဟုတ်
ICC သဘောထားတောင်းဆိုချက်ကို တုံ့ပြန်စရာ မရှိကြောင်း နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံရုံး ပြောကြား
ရိုဟင်​ဂျာများကို တိုက်​ခိုက်​ရာတွင်​ ​နောက်​ ကြိုးကိုင်​သူများအား ​ဖော်​ထုန်​ရန်​လို
ICC မှ မြန်မာ အစိုးရကို Observations သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ် –
ICC gives Myanmar deadline over Rohingya case jurisdiction
ဦးအောင်ဇော် ၀င်း (ခ) ဇော်ကီးအာ မတ် တရားရှင် လွတ်မြောက်
တရုတ်နိုင်ငံရွှေလီမြို့တွင် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား ဖမ်းဆီးမှုများ
​နေပြည်​​တော်​တွင်​ အထူးကိုယ်​စားလှယ်​ရုံး ထားရှိမည်​
သေမိန့်စောင့်နေတဲ့ ထောင်သားရဲ့ နောက်ဆုံးသောစာ……
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် Antonio Guterres နဲ့ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ဥက္ကဌ Jim Yong Kim တို့ ဘင်္ဂလာ​ဒေရှ်​ သို့သွားမယ်​
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ၇၃ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ တစ်နုိုင်ငံလုံးတွင် ကျင်းပ
မြန်မာ့သမိုင်းမှာ ပထမဆုံး မြင်ရတဲ့ဓါတ်ပုံ ​မွေး​နေ့ဓာတ်​ပုံ
KIA ထိန်းချုပ်ဒေသရှိ ဒုက္ခသည်များကို မထောက်ပံ့ရန် တပ်မတော် ထုတ်ပြန်
တရုတ်နဲ့ စာချုပ်တွေ မလေးရှားပြန်စိစစ်နေ
ရန်ကုန်မြို့  မြေအောက်မှ မဟာလျှို့ ဝှက်ချက်များ
ကုလအထူးအကြံပေး Christine Burgener ရခိုင်ပြည်နယ်ရောက်
ဦးကိုနီကို သတ်တဲ့ ကြည်​လင်း နှင့်​ အ​ပေါင်းအပါ​ တို့ကို အကြမ်းဖက်​ သမားများ မဟုတ်​​ကြောင်း ဆုံးဖြတ်​တဲ့ တရားစီရင်​ချက်​
“အလေးချိန် နှစ်တန်ရှိ ကျောက်စိမ်း အရိုင်းတုံးကြီး ဒလ၌ ဖမ်းမိ
အထောက်အထားမဲ့ ကလေးငယ်တွေ မိဘနဲ့ခွဲထားမှု အပေါ် သမ္မတ Trump ခုခံပြောဆို
ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး လှုပ်ရှားသူများ နိုင်ငံတကာ သံတမန်တွေနဲ့တွေ့ဆုံ
မွန်ပြည်နယ်ရေလျှံမှု အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းများဖွင့်ခဲ့
ရှေ့နေ ဦးကို အမှု ဘယ်လို အဆုံးသတ်မလဲ? RFA စုစည်းတင်ပြချက်
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ICC တရားရုံး
ကုလလူ့အခွင့်အရေးမဟာမင်းကြီး နောက်ဆုံးမိန့်ခွန်းမှာ မြန်မာကိုဝေဖန်
ICC ကိစ္စ ဗြိတိန်​ ​လောဒ်​အာမတ်ျုပါ
ရိုဟင်​ဂျာများ ​ဘေးကင်းစွာ ပြန်​ကြားခြင်း – Safety key for Rohingya returnees: U N
NHRC documents 53 sexual violence in Myanmar for ICC
အန်တီ(ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်) သုို့မေးချင်သော မေးခွန်းများ)
ICC ခုံရုံးသို ရိုဟင်​ဂျာ အမှုများ ​ရောက်​လာပြီ
ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသမီးတွေကို မုဒိန်းကျင့်မှု့ ၅၃ – မှု အတွက် အမျိုးသား လူ့အခွင့်ရေး ကော်မရှင်က ICC သို့ တင်ပြတိုင်တန်းရန်ရှိ
ကုလနဲ့ မြန်မာအကြား MOU ရခိုင်ဒေသခံတွေ လက်မခံ
ကုလအထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်၏ ပထမဆုံး မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ် ဇွန် ၁၂ ရက်တွင် စတင်မည်
​မြောက်​ကိုရီးယာ ​ခေါင်း​ဆောင်​ ကင်​ဂျုံ နဲ့ အ​မေရိကန်​ သမတ Trum နဲ့ ​တွေ့ဆုံ
ရိုဟင်ဂျာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုရမယ်လို့ အော်ရိုရာဆုရှင်ရှေ့နေ ဦးကျော်လှအောင်ဆို
ရခိုင်ပြည်နယ် ဆိုင်ရာ အကြံပေး ​ကော်မရှင် ၏ ဆောင်ရွက် ချက်များနှင့် အတွေ့ အကြုံများ မျှဝေရေး ဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့် စားပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ တွင် ကျင်းပ
G7 ထိပ်သီးညီလာခံမှာ ရိုဟင်ဂျာအရေး ဘော့ရေး ယနေ့အစီရင်ခံ တင်ပြမည်
ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခများ ဖြေရှင်း ရာတွင် ပြည်ပကူညီမှုများရယူရန် ဆန္ဒရှိဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော
ကုလ နဲ့ မြန်မာ သဘောတူညီချက် အပေါ် ဘဝင်မကျဖြစ်နေ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်က ငါးနှစ်တာအတွင်း ပထမဆုံး အကြိမ် NHK နှင့် အင်တာဗျူး
ကုလ သမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် အင်ဒိုနီးရှား အရွေးခံရ
ဦးတို​အောင်​အား နိုင်​ငံ​တော်​ အတိုင်​ခံရုံး အကြံ​ပေးခန့်​အပ်​
ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး မြန်မာထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင်တွေ အရေးပေါ်ဆွေးနွေး
နိုင်ငံ့ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များ၏ အရေးပေါ် အစည်း အဝေး ယနေ့ပြုလုပ်မည် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသား လွှတ်တော် အစည်း အဝေးများ ရုတ်တရက်ရွှေ့ဆိုင်း
ပထမဆုံး ကာ/လုံ အစည်းအဝေးကျင်း ပဖွယ်ရှိတယ်လို့ သတင်းထွက်
၀န်ကြီးချုပ် Hasina G-7 ညီလာခံ မှာ ရိုဟင်ဂျာအရေး ဆွေးနွေးမည်
Categories Select Category ကျန်းမာရေး (531) ခရစ်ယာန်ဘာသာ (10) စာပေအက္ခရာ (4) ထူးဆန်းထွေလာ (125) နည်းပညာ (91) ဖတ်စရာကဏ္ဍ (3) ဗဟုသုကဏ္ဍ (14) ဗုဒ္ဓဘာသာ (78) မျက်မှောက်ရေးရာ (4) မှတ်စု (1,356) သတင်းများ (12,055) သမိုင်း (426) သုတစာပေကဏ္ဍ (60) အင်္ဂလိပ်စာကဏ္ဍ (58) သူ့အကြောင်း (361) အင်တာဗျူး(259) အစ္စလာမ်ဘာသာ (339) အထူးကဏ္ဍ (2,080) အိတ်ဖွင့်စာ (22) အထောက်ထားများ (162) အထွေထွေ (38) အခြားကဏ္ဍ (2) အခြားဘာသာ (6) ဥပဒေ (207) ဆောင်းပါးများ (4,533) ပေါ်လစီ (881) ရွေးကောက်ပွဲ (167) မြန်မာ – English (9) မြန်မာစကားပုံ (7) Burmese Version (1) Census (166) Contact (6) Dictionary (9) English Dictionary (3) Other Dictionary (1) Discovery (109) Election (3) English – မြန်မာ (8) English – Rohingya (3) English Version (1,536) Articles (743) Documents (94) History (261) Arakan History (194) Burmese History (57) M-M History (46) Scripts (5) World History (42) Interview (19) Laws (12) News (942) Breaking News (282) Local News (292) Open Letter (11) Other News (10) World News (533) Religious (37) Islamic (36) Other Religious (2) English-Myanmar, Pali-Myanmar (1) General (219) Introduction (5) Link (248) Movie (86) Other Dictionary (6) Photos (752) Popular Post (5) Rohingya – English (10) Special (5) Videos (340) Website (43)
Archives ယခင် ပိုစ်များဖတ်ရန်
Archives ယခင် ပိုစ်များဖတ်ရန် Select Month June 2018 (67) May 2018 (102) April 2018 (69) March 2018 (78) February 2018 (100) January 2018 (85) December 2017 (116) November 2017 (118) October 2017 (98) September 2017 (118) August 2017 (117) July 2017 (80) June 2017 (14) May 2017 (8) April 2017 (16) March 2017 (11) February 2017 (11) January 2017 (20) December 2016 (50) November 2016 (23) October 2016 (23) September 2016 (15) August 2016 (33) July 2016 (40) June 2016 (41) May 2016 (52) April 2016 (113) March 2016 (96) February 2016 (99) January 2016 (178) December 2015 (140) November 2015 (201) October 2015 (88) September 2015 (93) August 2015 (140) July 2015 (91) June 2015 (93) May 2015 (143) April 2015 (150) March 2015 (150) February 2015 (105) January 2015 (155) December 2014 (289) November 2014 (175) October 2014 (195) September 2014 (166) August 2014 (189) July 2014 (266) June 2014 (184) May 2014 (314) April 2014 (256) March 2014 (242) February 2014 (218) January 2014 (340) December 2013 (258) November 2013 (231) October 2013 (232) September 2013 (234) August 2013 (387) July 2013 (359) June 2013 (533) May 2013 (672) April 2013 (701) March 2013 (717) February 2013 (626) January 2013 (861) December 2012 (712) November 2012 (665) October 2012 (719) September 2012 (449) August 2012 (553) July 2012 (434) June 2012 (541) May 2012 (423) April 2012 (360) March 2012 (87) February 2012 (89) January 2012 (26) December 2011 (83) November 2011 (37) October 2011 (1)
The Hidden Genocide: မြန်မာစာတန်းထိုး
ROHINGYA AND BENGALI
ရိုဟင်ဂျာများသိထိုက်သောသမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန်များ (အပိုင်း ၁၊၂)
MP U Shwe Maungs’ activities: Member of Parliament at Pyithu Hluttaw
Rohingya History: Myth and Reality By Zul Nurain
“A SHORT HISTORY OF ROHINGYAS AND KAMANS OF BURMA”
Presentation About Ethnic Rohingya in Myanmar: Treatment of Ethnic Minorities
Rohingya History by U Kyaw Khin (Thai)
Short History of Panthay Muslim: ပန်းသေးမွဆလင်(တရုတ်အနွယ်) အမျိူး သား များ ဆင်း သက် လာ ပုံ သ မိုင်း အ ကျဉ်း
The Plight ofaPeople in Black and White
The Union of Burma and Ethnic Rohingyas’ History in Burmese by Zaw Min Htut – Japan
ကမန်မျိုးနွယ်စု သမိုင်း – မောင်ဆန္ဒ(လယ်ဝေး)
အာရ်ကာန် (ခ) ရခိုင် နိုင်ငံတော်နှင့် ရိုဟင်ဂျာ သမိုင်း အကျဉ်း
Rohingya Documents ရိုဟင်ဂျာ အထောက် အထား လင့် များ
Inscription ( သမိုင်းအထောက်အထားများ )
Rohingya Reply in Response to Berlin Khin Maung Saw: ဘာလင် ခင်မောင်စော သို့ ရိုဟင်ဂျာ တို့ တုန့်ပြန်
၁၈၂၄ မတိုင်မီ ကပင် ရိုဟင်ဂျာများ ရခိုင်ပြည်တွင် ရှိ ကြောင်း မြန်မာ့သမိုင်း၊ ကမ္ဘာ့သမိုင်း ပ ညာ ရှင် များ အ တည် ပြု ပြော ဆို
The Best Doccuments of Rohingyas in Burma: အကောင်းဆုံး ရိုဟင်ဂျာ အထောက် အထား များ
Arakan Muslim’s Document: ရခိုင်ပြည်ရှိ မွတ်ဆလင် အထောက် အထား များ
Islam and Minority in Myanmar
Myanmar officially considered Rohingyaaconstitutive ethnic group indigenous to the north western borderlands of Burma & East Pakistan:ရိုဟင်ဂျာ အထောက် အထားများ
Rohingya History: (ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုသမိုင်း) By Dr. Zamiruddin
Two Inscriptions from Arakan: ရခိုင်ပြည်မှ ကျောက်စာမှတ်တမ်း ( ၂ ) ခု
ဗုဒ္ဒေါမောကန် (ရေးသူ- ဒေါက်တာ သန်းထွန်း)
AD(၁၈၂၃)ခုနှစ် မ တိုင် မီ က မြန် မာ နိုင် ငံ ၌ ပင် ရင်း နိုင် ငံ အ ဖြစ် နေ ထိုင် ကြ ခဲ့ သော မွတ်ဆလင်များ
HISTORICAL BACKGROUND OF ARAKAN: ရခိုင်ပြည်၏ နောက်ခံ သမိုင်း
The etymology of Arakan, Rohingya and Rakhine
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသလား ? ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါတယ်။ အပိုင်း (၁) မှ (၁၀)
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးနှင့်ပတ်သက်သောသမိုင်းနှင့် ဥပဒေ ဆိုင် ရာ အ ထောက် အ ထား များ
ရိုဟင်ဂျာ ကိုတိုင်းရင်းသားကဖြုတ်ပြီး ဒိုင်းနက် နှင့် ကိုးကန်း ကိုတိုင်းရင်းသားလုပ်တာကလူမျိုးရေး ပြသနာလား။ ဘာသာရေး မုန်းတီးမှုလား။
ဥပဒေပြဌာန်း၍ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းခံရကြောင်း၊ ပြည် သူကြား က ရိုဟင်ဂျာ စကား
နိုင်ငံမဲ့ဖြစ်ရန် လွယ်ကူသော်လည်း နိုင်ငံသားဖြစ်ရန် ခက်ခဲလှသည့် ၁၉၈၂ နိုင်ငံသား ဥပဒေ
မလွဲမသွေပြန်လည်ရေးဆွဲရမည့် ၂၀၀၈-ခုနှစ်ဖွဲ့စည်း ပုံအခြေခံဥပဒေ နှင့် ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ သား ဥပဒေ
နိုင်ငံတောဝန်ကြီးချုပ် ဦးနုသို့ ရခိုင်ပြည် မြောက် ပိုင်း မှ သ၀ဏ်လွှာ
ရခိုင်ဒေသရှိရိုဟင်ဂျာလူဦးရေအကြောင်း တစ် စေ့ တစ် စောင်း
ဒေါက်တာအေးချမ်းနှင့်အပေါင်းပါတို့ အတွက် ရှင်းလင်း ချက် –
Total guests visited လာဖတ်သည့် ဧည့်သည်ပေါင်း
Visitors’ Countries Since 16-11-2012;လာဖတ်သူတို့ နိုင်ငံ
Click here to read the articles by date-posted ရက်စွဲ အလိုက် ဖတ်ရှုရန်
Graphics for Animated
Anti Fake Rakhine Campaing
Arakan Human Rights Watch ရခိုင်ပြည်လူ့အခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေး
Arakan Rohingya Council အာရကန်ရိုဟင်ဂျာကောင်စီ
မောင်ပေါက် Knowledge Note
မြားနတ်မောင်လေး – အင်တာနက်လမ်းညွှန်
ငြိမ်းချမ်းအေး @ Nyein Chan Aye
B N I News
Burma Muslim – ဗမာမွတ်စလင်
Burma Native Muslim
Burma Times Net
Daily Muslim News
Dr. Ko Ko Gyi
E-Books – မြန်မာ စာအုပ်များ
Hot News ဟော့နယူစ်
HTML Marquee Code
Information For Myanmar
Irrawaddy – ဧရာဝတီ
Islam in Myanmar
Islam Yaungche အစ္စလာမ်ရောင်ခြည်
Kyaw Kyaw Oo's Blog
Leiway Thar လယ်ဝေးသား
Loon Watch – The Mooslims
M-Media Group မြန်မာမွတ်စလင်မီဒီယာ
Mayu Press မေယုပရဲစ်
Moe Maka မိုးမခ
Muslim Time မွတ်စလင်သတင်းစဉ်
Myanmar Book Shop
Myanmar Islam Friends မြန်မာမွတ်စလင်မိတ်ဆွေများ
Myanmar Muslim – မြန်မာမွတ်စလင်ဂျာမဏီ
Myanmar Muslim မြန်မာမွတ်စလင်
Myanmar Political News
Myanmar Rohingya Library ရိုဟင်ဂျာစာကြည့်တိုက်
Myanmar Times မြန်မာတိုင်းမ်
Myanmar Web Designer နည်းပညာ post
Myit Makha မြစ်မခ
Online Dip – in – Law
R F A လွတ်လပ်သောအာရှအသံ
Rohingya Blogger ရိုဟင်ဂျာဘလောဂါ
Rohingya Express ရိုဟင်ဂျာသတင်း
Rohingya News Agency
Rohingya Radio – VOR
Rohingya Update News
Rohingya Vision -ရိုဟင်ဂျာအသံလွင့်
San Oo Aung's Blog
Shwe Myanmar ရွှေမြန်မာ
SKY NET စကိုင်းနတ် ကိုအွန်လိုင်းမှာကြည့်
The Arakan Dairy
The Mooslims,thye're here
The Voice of Rohingyas – ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုအသံ
Thit Htoo Lwin သစ်ထူးလွင်
V O A ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်း
Web Design မောင်(စွယ်စုံကျမ်း)
White Media အဖြူရောင်မီဒီယာ
Ygn News (Myanmar CNN)